Shirkad duulimaad oo hakisay qaar kamid ah duulimaadyadeeda cabsi darteed | Saxil News Network
Shirkad duulimaad oo hakisay qaar kamid ah duulimaadyadeeda cabsi darteed
“Annagoo ka duuleyna xogta horudhaca ah, waxaan ogaanay in baaritaanada lasii xoojiyo, gaar ahaan marwaaxadaha matoorka oo ah nooc u gaar ah matoorka diyaaradahan.” Ayay yirahden mas’uuliyiinta hey’adda duulimaadyada ee dalka Mareykanka.
Waxay la kulmayaan wakiila ka kala socda shirkadda sameysay matoorka diyaaradda iyo Boeing.
Diyaaradda oo ay saarnaayeen 231 qof iyo 10 shaqaale ah ayaa dib ugu laabatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Denver, mana jirin cid wax ku noqotay.
Muuqaal laga duubay diyaaradda ayaa muujinaya matoorka midig ee diyaaradda oo ololaya.
Dowladda Japan oo ka jawaabeysa falkaas ayaa dhammaan shirkadaha diyaaradaha Boeing 777 ee isticmaala matoorka diyaaradaha ee ay sameyso shirkadda Pratt iyo Whitney sheegtay in aysan soo geli karin hawada dalkaas ilaa iyo amar dambe.
Haseyeeshee shirkadda Boeing ayaa sheegtay inay taageersan tahay go’aanka dowladda Japan, loona baahan yahay in la hakiyo hawlgellinta dhammaan diyaaradaha noocoodu yahay Boeing 777 ee ay ku rakiban yihiin matoorada Pratt iyo Whitney inta ay socdaan baaritaanada. Shirkadda waxaa kale oo ay sheegtay in diyaaradaha Boeing 777 ee ku duula matooradaas ay guud ahaan caalamka gaarayaan 69.
Matoorka diyaaradda oo ololaya ayaa kusoo dul dhacay guryo ku yaalla magaaladaasi, waxaana saarnaa rakaab dhan 231 iyo 10 ka mid ah shaqaalaha diyaaradda. Boolista ku sugan magaalada Broomfield ayaa baahiyey sawir muujinaya qaybta hore ee matoorka diyaaradda oo guryo ku soo dul dhacay.
Diyaaradda ayaa markii dambe si nabad ah ku soo cago dhigatay garoonka diyaaradaha ee Denver, wax qasaara ah oo shilkaasi ka dhashayna lama soo sheegin.
Mid ka mid ah dadki rakaabka ahaa ee diyaaraddaasi saarnaa oo wakaaladda wararka ee AP u warramay waxaa uu sheegay inuu duuliyaha diyaaradda uu rakaabka u sheegay inuu qarax aad u weyn uu jiro.